ကျွန်မ၏ ဘဝငရဲ – Grab Love Story
မိုးသီတဲ့ဟေ့………… တသီးတည်းရှိတယ်နော်… ခွပ်ခွပ် ခွပ်……မြင်းခွာသံများက.တဖြောင်းဖြောင်း..ရွာထိပ်..လမ်းမကြီးမှာလည်းဖုန်တလုံးလုံးနှင့်……သူကြီးရေ..ဗျို့သူကြီး..ရွာသားလေးတစ်ယောက်.သူကြီးအိမ်ရှေ့သို့.အပြေးအလွှားရောက်လာသည်…ဘာတွေဖြစ်လို့လဲဟ..ဓားမြဗိုက်.မိုးသီး..လာနေပီ..ဗျ.. ရွာသားလေး.မှာစကားပင်မဆုံးလိုက် သူကြီး.ခင်များတို့ရွာကို.တောင်းထားတဲ့ဆက်ကြေးဘယ်မှာလဲ..ဟု..မိုးသီး၏ပြောလိုက်သောအသံသည်။ သူကြီး၏ရင်ကိုဗလောင်ဆူသွားစေသည်။
ဒီနှစ်က.မိုးသည်းထန်ပြီးစပါးမတင်ချေ..ရွာတွင်စီးပွားရေးမကောင်း..မိုးသီးတို့ကိုပေးရန်ဆက်ကြေးကမလုံလောက်…ရွာသူရွာသာားများရှေ့မှောက်တွင်…..သူကြီး.ခင်ဗျားတို့ဆက်ကြေးမပေးနိုင်ဘူးလား…. မိုးသီးရယ်..ဒီနှစ်ငါတို့ရွာစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ပါ..နောက်နှစ်ကျပေးပါ့မယ်ကွာ..´တောက်´ မလိုချင်ဘူးဗျာ..ခုမပေးရင်.ခင်များနဲ့ခင်များမိသားစုကို…ပြန်ပေးဆွဲသွားမယ်..နောက်..တစ်လအတွင်းခင်များရွာသူရွာသားတွေက..ဆက်ကြေးလာပေးရင်ပေးမပေးရင်.ခင်ဗျားတစ်မိသားစုလုံးကိုသတ်ပစ်မယ်… ကဲပြောရင်ကြာတယ်ဗျာ.ခုလိုက်ခဲ့..ဗိုလ်မိုးသီးသူကြီးမိသားစုကိုဖမ်းသွားပြီဟေ့…..ဆိုသောသတင်းသည်.ရွာအနှံ့ပြန့်နှံသွားလေတော့သည်။ဘယ်သူတွေပါသွားသေးလဲ..သူကြီး၊ သူကြီးကတော်.ဒေါ်ငွေခင်၊သမီးလေး..ခင်မှုံ.၊ သားလေး..ရွှေတိုး..ချွေးမလေး..ခင်ရီနဲ့.အိမ်ဖော်ကလေးမလေး……..ဒါးဒါးတို့..ပါသွားတယ်တဲ့တော်..ထိုသတင်းသည် ..ရွာတွင်.အတင်းအဖျင်းပြောလေ့ရှိသော.ဒေါ်ဘုမမှတဆင့်တရွာလုံးပျံနှံ့သွားလေတော့သည်။
တလပြည့်လို့မှ….ဆက်ကြေးလာမပေးရင်…သူတို့အားလုံးးကိုသတ်ပစ်မှာတဲ့………နိဒါန်းလေးကတော့.ဒီလောက်ပါပဲဗျာ..နောက်နေ့မှဆက်ကြစို့..ဘော်ဘော်တို့ရေ..ကျလိကျလိ….ဟူသော..ငှက်ငယ်လေးများ၏ တွန်ကျူးသံများက..ရိုးမတောကြီးထဲတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ ထိုသို့သော.သာယာလှသော..သဘာဝအလှကိုဖျက်ဆီး..နေသော.အရာများကား လူတစ်စုကိုလက်နက်ကိုင်ဓားမြများမှ. ဖမ်းခေါ်လာခြင်းပင်။ မြန်မြန်သွားစမ်း…..စခန်းကိုရောက်ဖို့ဒီချောင်းကို.ဖြတ်ရမယ်.လာ.ရှေ့ကသွားစမ်း ..ဗိုလ်မိုးသီး၏ အမိန့်ပေးသံ..နှင့်အတူ. တပည့်များက.. လူတစ်စုကို..သေနတ်ထောက်ပြီးဖမ်းခေါ်လာသည်။ဖမ်းခေါ်လာသော.လူတစ်စုမှာ..သူကြီးမိသားစုပင်.. သူကြီးသမီးလေးခင်မှုံမှာ. အသက် 25နှစ်ရှိပေပြီ။
ရွာ၏ကွမ်းထောင်ကိုင်တစ်ယောက်..ရုပ်လေးမှာ.လှပကျော့ရှင်းသကဲ့သို့. ခန္ဒာကိုယ်မှာလည်း..ဖွံ့ထွားလှသည်။ ထမိန်ပျော့ပျော့လေးကို… ခါးတွင်တင်းတင်းဝတ်ဆင်ထားသဖြင့်. စွင့်ကားလှသော..တင်အစုံမှာ..ယောကျားတိုင်းလည်ပြန်ကြည့်ရလောက်အောင်..တင်းရင်းလှသည်။ ဖြောင့်စင်းလှသောပေါင်တံအစုံမှာလည်း. ဆင်စွယ်နှစ်ချောင်းသဖွယ်ပင်။`ကဲအားလုံးချောင်းထဲဆင်းကြ….ရေစီးကကြမ်းတယ်နော်.သတိထားကြ..မတော်ရင်မျောသွားလိမ့်မယ် ´ ဗိုလ်မိုးသီး၏စကားအဆုံးတွင်အားလုံး.ချောင်းထဲဆင်းလိုက်ကြသည်။ ချောင်းရေမှာ..ပေါင်လယ်လောက်အထိရှိသည်။
ချောင်းရေကြောင့်..ဖမ်းခေါ်လာသောအမျိုးသမီးများမှာ.ရေများစိုရွှဲနေပီး.ထမိန်လေးများမှာ..အသားတွင်ကပ်နေလေတော့သည်။ တကယ်တော့.မိုးသီတို့.ဓားမြအဖွဲ့မှာ 12ယောက်ရှိသည်အားလုံး.မိန်းမဆိုသော.အရာနဲ့.ပြတ်လပ်နေသည်မှာကြာပေပြီ။ သူတို့..သူကြီးမိသားစုကို.ဖမ်းခေါ်လာခဲ့သည်မှာ..သူတို့အလိုကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ထိုလူ12ယောက်ထဲတွင်. မိုက်ကြီးသည်.အဆိုးဆုံး.အကြောင်းမှာသူသည်…ခင်မှုံလေးနောက်မှ.သေနတ်ဖြင့်ထောက်ကာ…လိုက်ပါရလေသည်။ ခင်မှုံလေး၏ရေစိုအလှများမှာ……မိုက်ကြီး၏ရမက်သွေးများကိုဆူပွက်စေသည်။ မိုက်ကြီးစိတ်မထိန်းနိုင်တော့.. ရေစိုပြီးအသားနဲ့.တသားတည်းကပ်နေသော. ဖွံထွားလှသည့်တင်သားကြားမှ..အမြောင်းလေးအတိုင်း သေနတ်ပြောင်းဖြင့်.ထောက်ထားလိုက်လေတော့သည်။ ခင်မှုံမှာရုတ်တရက်တုန်ခါသွားသည်. ရင်ထဲလှိုက်ခနဲ မိမိဖင်သားလေးထဲသို့.အေးစက်စက်သေနတ်ပြောင်းက.တိုးဝင်လာသည်။ သာယာမှုက.ခဏတာ . ချက်ချင်းဒေါသဖြစ်သွားသည်။
´ ရှင်ဒါဘာလုပ်တာလဲ.နှမချင်းမစာနာတဲ့သူ..ရှင့်ညီမကိုအဲလိုလုပ်ပါလား ´ ဟုပြောကာ..ဖြန်းးးးးးးးးးးးးမိုက်ကြီးပါးမှာ.တမဟုတ်ချင်း.နီရဲလာသည်။ မိုက်ကြီးဒေါသက..ထောင်းခနဲ ညီလေးကလည်း.ဗျောင်းဆန်နေပီ..´တောက်` ခွေးမ..လူပါးဝလို့……နင်တုိ့ကို.လိုးချင်လို့.ဖမ်းခေါ်လာတာ..သိပြီလား.သိပ်မာန်ထောင်မနေနဲ့..ဟုပြောကာ..တွန်းလွှတ်လိုက်လေရာ..ခင်မှုံလေးမှာ.ချောင်းရေထဲ..သို့်ပက်လက်လှန်ကျသွားပြီး ရေစီးနှင့်အတူမျှောပါသွားလေတော့သည်။ ဟေ့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ…ဗိုလ်မိုးသီး၏အမေး..ဒီခွေးမ…ရေထဲကျပြီးမျှောသွားလို့ဆရာရေ..မိုက်ကြီ၏အဖြေစကား ဘာ…….နှမြောစရာကွာ.လိုက်ဆယ်စမ်းပါဦး..ဒီကောင်မလေးက.အတော်တောင့်တာကွ..ငါ.မှာလည်းတော်တော်တင်းနေတာနဲ့.သူလေးနဲ့ပျော်ချင်လို့ဟာ.မင်း.သောက်သုံးမကျဘူးကွာ.စခန်းရောက်မှမင်းကိုအပြစ်ပေးရမယ်..မိုက်ကြီးမှာ..ခေါင်းငိုက်စိုက်နှင့်.ဆက်လိုက်တာသည်။ ခင်မှုံလေးမှာ.ရေစီးနှင့်အတူမျှောပါသွားလေတော့သည်။လိုက်ဆယ်သော်လည်းမမှီတော့..။ မိုက်ကြီး၏မျက်စိထဲတွင်မူ. ရေများစိုရွဲနေကာ..အိတုန်နေသောခင်မှုံလေး၏ တင်သားများကိုသာ.မြင်ယောင်နေမိသည်။
တောက်..စားရခံကြုံခါနီးမှကွာ…… ဒီလို.အိုးမျိုးကို..ကြိတ်လိုက်ရရင်တော့.ဟု.မကျေမချမ်းဖြစ်နေမိသည်။ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းရောက်ပီး.ခဏအကြာ..ဗိုလ်မိုးသီးတို့စခန်းသို့ရောက်ရှိလာလေတော့သည်။ ဟေ့……ဖမ်းလာတဲ့သူအားလုံးကို တန်းစီခိုင်းလိုက်စမ်းးးးးးးးသူကြီး ၊ သူကြီးကတော် ဒေါ်ငွေခင် ၊ သား ရွှေတိုး ၊ ချွေးမလေး ခင်ရီ နှင့် အိမ်ဖော်မလေး ဒါးဒါး တို့ အစဉ်အတိုင်း မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းလိုက်သည်။သူကြီးသမီးချောလေး ခင်မှုံတစ်ယောက်တော့မပါ ချောင်းရေထဲမျှောပါသွားလေပြီ။ အားလုံးတန်းစီရပ်ပြီးသောအခါ ဗိုလ်မိုးသီးက တစ်ဦးချင်းလိုက်ကြည့်လေသည်။ အမှန်တော့ ဘယ်သူ့စလိုးရင်ကောင်းမလဲ ဟု ကြည့်နေခြင်း ဒေါ်ငွေခင် သူကြီးကတော်ကြီး။ သူကြီးကတော်ဖြစ်သောကြောင့်သာ ဒေါ်တပ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်က 35 သာသာခန့်သာရှိသေးသည်။ ခါးအနည်းငယ်တုတ်သော်လည်းတင်သားများမှာ တောသူပီပီဖွံ့ထွားလှသည် တသားမွေးတသွေးလှဆိုသလို ရွှေတိုးမှလွဲပြီး နောက်ထပ် သားမယူခြင်းကြောင့်အရွယ်တင်သည်။
ဗိုလ်မိုးသီးလိုပန်းစားဘီလူးအဖို့ သရေကျစရာပင်။ ခင်ရီလေး သူကြီးသားရွှေတိုး၏မိန်းမ အသစ်စက်စက်ကလေး လက်ထပ်တာမှ သုံးလမပြည့်သေးပေ။ ရွှေတိုး၏အရသာရှိသော ညစာဇနီးချောလေးမှာ ဗိုလ်မိုးသီးလက်တွင်းရောက်ရရှာလေပြီ။ အိမ်ဖော်မလေး ဒါးဒါး သူလေးကတော့ ကလေးသာသာလေးပင်။ သို့သော် ဗိုလ်မိုးသီးတို့က အလွတ်ပေးမည့်ပုံမပေါ် ။ မွေးစားမည့်ပုံပင်။ ခင်မှုံလေးအကြောင်းဆက်ရမည်ဆိုလျှင်……ရေစီးနှင့်အတူမျှောပါသွားသောခင်မှုံလေးသည် အသက်မသေပဲ ကမ်းစပ်တစ်နေရာတွင်တင်နေသည်။ ရေများမွှန်းနေသဖြင့် သတိမေ့နေလေသည်။ ခါးမှ ထမိန်လေးမှာလည်းရေစီးအရှိန်ကြောင့် ဘယ်ဆီရောက်သွားသည်မသိ၊ခင်မှုံလေး၏ အောက်ပိုင်းအလှတရားများမှာ ဝင်းဝင်းထိန်ထိန်နှင့် ပုရိသယောကျာ်းအပေါင်းကို ဖိတ်ခေါ်နေသယောင်ယောင်။ မျက်လုံးထဲဝင်းခနဲလက်ခနဲ ကျွန်မခင်မှုံနှိုးလာတော့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည့်တခဏ ကျွန်မဘေးပတ်ပတ်လည်တွင် ကြောက်စရာမျက်နှာများစွာက ဝိုင်းငုံ့ကြည့်နေကြသည်။ကျွန်မခါးးအောက်ပိုင်းတွင်လည်း အဝတ်တစ်ခုမျှမရှိ ရှက်ရွှံစွာဖြင့် ရတနာရွှေကြုတ်လေးကို လက်လေးဖြင့်ဖုံးအုပ်ကာမိသည်။
မျက်နှာတွင်ကြောင်ကြောင်ကြားကြား ခြယ်ထားသော လူတစ်စုက ကျွန်မကို ဝိုင်းကြည့်နေကြသည်။ အူးရိုးရှိ……. ရိုးတရစ်ကော ရိုးတရစ်ကောအရပ်မြင့်မြင့် ခန္ဒာကိုယ်တောင့်တင်းလှပြီး ခေါင်းတွင် သစ်ခက်များဆောင်းထားသည့် ယောကျားပျိုတစ်ဦးက ပြောလိုက်သောအသံနှင့်အတူကျွန်မ၏လက်နှင့် ခြေထောက်များကိုဝါးလုံးနှင့် ပူးချည်ကာ ကြောင်ကြောင်ကျားကျားလူများက ထမ်းခေါ်သွားလေတော့သည်။ ဒုံ..ဒုံ…ဒုံ..ဒုံ ဗုံ.. ဗုံ …ဗုံ ..ဗုံ နားထဲတွင် ဗုံတီးသံများကို အဆက်မပြတ်ကြားနေရသည်။ကျွန်မကို စင်မြင့်တစ်ခုထက်သို့ခေါ်သွားလေသည်။ ကျွန်မခင်မှုံကို စင်မြင့်တစ်ခုထက်သို့ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်။ စင်ပေါ်တွင် မျက်နှာကြောင်ကြောင်ကြားကြားခြယ်ထားသော ယောင်္ကျားပျိုဆယ်ယောက်ကအဝတ်အစားကင်းမဲ့စွာ ကိုယ်လုံးတီးဖြင့် တန်းစီကာ မတ်တပ်ရပ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရလေသည်။ ကျွန်မကို စင်ပေါ်ရှိ ကုတင်ကဲ့သို့ အရာတစ်ခုပေါ်တင်ပြီးလက်နှစ်ဖက် ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကြိုးများဖြင့် တုပ်နှောင်လိုက်လေသည်။ ကြောက်လန့်စိတ်မှာ ထိန်းမရ။ ထိုသူတွေမှာမည်သူတွေမှန်းလည်းမသိ၊ မိမိကိုမည်သို့ပြုလုပ်မည်မှန်းလည်းမသိ။ မတ်တပ်ရပ်နေသော လူဆယ်ယောက်မှာလည်း ကြောက်စရာကောင်းလှသည်။
သူတို့၏ အတံကြီးတွေ မှာ ရှည်ရှည်တုတ်တုတ်ကြီးတွေကြည့်ရင်းအသဲယားလာပြီး မျက်နှာလွှဲမိသည်။ ထိုစဉ်မှာပင် လူတစ်ယောက်က ကျွန်မအနားကပ်လာပြီး ကျွန်မ၏အပေါ်အကျီင်္ကို အတင်းဆွဲချွတ်နေသည်။ လက်နှင့်ခြေထောက်နှစ်ခုလုံး ကြိုးများဖြင့် ချည်နှောင်ခံထားရသဖြင့် မရုန်းနိုင်ပါ။ အရှက်ကိုငှဲ့ကွက်သောကြောင့် အတင်း ကိုယ်ကိုတွန့်ကာရုန်းသော်လည်း မရ ၊ ကျွန်မ ခန္ဒာကိုယ်တွင် အဝတ်တစ်ခုမှမရှိတော့ ၊ လူအများရှေ့ အထူးသဖြင့် ယောကျာ်းများ၏ရှေ့တွင် ထိုသို့ အဝတ်မပါ နေရသည်ကို ရှက်လှသော်လည်း မည်သို့မျှ မတတ်နိုင်ပါချေ။ `ဝုန်း… ဝုန်း..´ကျွန်မတကိုယ်လုံး စိုရွှဲသွားလေသည် လူနှစ်ယောက်ခန့်က ရေပုံးများဖြင့် ကျွန်မကို ပက်ဖြန်းလိုက်သောကြောင့် ပင်။လေ ကလည်းတဖြူးဖြူးတိုက်ခတ်နေသည်။ ရေစိုရွှဲနေသဖြင့် ချမ်းအေးလှသည်။ သူတို့ ကျွန်မကို ဘာလုပ်ကြမည်မသိ၊ လူရိုင်းများဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်မကို ရေချိုးပေးပြီးကင်စားလေမလား ရင်တထိတ်ထိတ်နှင့်၊ ခဏအကြာ လူရိုင်းမလေးသုံးယောက်က အဝတ်အထည်များဖြင့် ကျွန်မကိုယ်ပေါ်ရှိရေများကို လာရောက်သုတ်ပေးကြသည်။ ရေများခြောက်သွားသောအခါ ဆီများဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံး အနှံ လိမ်းကျံ က နှိပ်နယ်ပေးလေတော့သည် ။
သူတို့ ၏ အထိအတွေ့လေးများ မှာ နူးညံ့လွန်းသည်က တစ်ကြောင်း၊ ပင်ပန်းသည့်ဒဏ်က တစ်ကြောင်းမို့ ခဏအတွင်းပင် အိပ်ပျော်သွားလေတော့သည်။ လူရိုင်းမလေးငါးယောက်က ခင်မှုံတကိုယ်လုံးကို နံ့သာဆီများ လိမ်းကျံပေးနေလေသည်။ ဆီများ အသားထဲစမ့်ဝင်စေရန်အသားများကိုဆုပ်နယ်ပေးနေသည်။ ခင်မှုံလေးမှာ အိပ်ပျော်သလိုမှိန်းနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။ ထိုစဉ် တကိုယ်လုံး အဝတ်အစားမပါသောယောက်ျားပျို ငါးယောက်က ခင်မှုံလေးကို တင်ထားသော စင်နားသို့ ရောက်လာသည်။ လက်ရွေးစဉ်လူရိုင်းပျိုချောများ ဖြစ်ပေသည်။ အားလုံးမှာ ယောင်္ကျားပီသသော ရုပ်ရည်နှင့် ခန္ဒာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြလေသည်။ တစ်ယောက် ခင်မှုံ၏ ခေါင်းဖက်တွင်နေရာယူသည် ၊တစ်ယောက်က ခြေရင်း တစ်ယောက်က ညာဖက်ဘေးတွင်နေပြီး ကျန်နှစ်ယောက်က ဘယ်ဘယ်ဘေးတွင် မတ်တပ်ရပ်ကာ နေရာယူလိုက်ကြသည်။ ဆီများလိမ်းပေးနေသော လူရိုင်းမလေးများမှာ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကြပြီး ထို ယောကျားပျိုများ၏ ထွားကြိုင်းလှသော လိင်တံများကိုဆုပ်ကိုင်ကာ ပုလွေပေးလေတော့သည်။ ဗုံ.. ဗုံ .. ဗုံ တီးသံများက အဆက်မပြတ်၊ လူရိုင်းများကား စင်အောက်တွင် အသီးသီးကခုန်နေကြသည်။လူရိုင်းမလေးများ၏ ပုလွေအစွမ်းကြောင့် လူရိုင်းပျိုများ၏ လိင်တံများကား နီရဲပြောင်လက်ကာ အရည်များစိုရွှဲလာလေတော့သည်။
ထိပ်ဖူးကြိးများမှာတင်းကားနေပြီး အကြောတပြိုင်းပြိုင်းထနေသည်။ လူရိုင်းများက ခင်မှုံလေးကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ကဲ့သို့ နတ်ဆိုးရုပ်ထုများ ထုထားသော တိုင်တွင် မတ်တပ် ရပ်လျက် ကြိုးများဖြင့် တုပ်နှောင်လိုက်လေတော့သည်။ခင်မှုံလေးမှာ နိုးလာလေတော့သည်။သူမမြင်လိုက်ရသည်ကား သူမကို ဝိုင်းထားသော အတွဲငါးတွဲမှာ ရှက်စရာကောင်းလောက်အောင် ပြုမူနေကြသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်။ အပျိုမလေးကွမ်းထောင်ကိုင်ဖြစ်သည့်အလျောက် ယောင်္ကျားမိန်းမ လိင်ဆက်ဆံကြသည်ကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှမမြင်ဖူးပေ၊ ယခုကဲ့သို့သူမကို ဝိုင်းပတ်ပြီးအသိးသီးလိုးနေကြသည်ကို မြင်ရသောအခါ အံသြတနန်းဖြစ်ရလေသည်။မြင်ရသည်မှာ အသည်းယားစရာ လူရိုင်းပျိုလေးများ၏ တုတ်ခိုင်လှသော လိင်တံကြီးများက ဒူးထောင်ကုန်းကာ ဖင်ကော့ပေးထားသောလူရိုင်းမလေးများ၏နောက်မှ ခွေးကုန်းပုံစံ ဖြင့် တဖုန်းဖုန်းနှင့် ဆောင့်နေသည်။ လူရိုင်းမလေးများ၏ စွင့်ကားလှသော တင်သားများမှာ ဆောင့်ချက်များကြောင့် တုန်ရီနေလေသည်။ ဆီးစပ်ချင်းရိုက်မိသောအသံကား တဖတ်ဖတ်နှင့်အပျိုမလေးခင်မှုံတစ်ယောက် မိမိရှေ့တွင် ယောင်္ကျားမိန်းမ လိင်ဆက်ဆံနေသည်ကို ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ရန်ခုန်လာလေတော့သည်။ နို့အုံများမှာလည်းတင်းလာလေသည်။
နို့သီးလေးများပင်ကော့ထောင်လာလေတော့သည်။ ပိပိလေးမှာလည်း အရည်တို့ဖြင့် စိုစွတ်လာလေတော့သည်။ လူရိုင်းမလေးများကဲ့သို့ပင်လီးကြီးများဖြင့်ခံချင်စိတ်များ ပေါ်လာလေသည်။ လူရိုင်းတို့ လိုးနေကြပုံမှာ အား၇ပါးရရှိလှသည်။ အကြောတပြိုင်းပြိုင်းနှင့် လိင်တံကြီးက ပန်းနုရောင်အတွင်းသားလေးထဲသို့ ဇွတ်ခနဲ ဇွတ်ခနဲ ဝင်သွားပုံမှာအသည်းယားစရာကောင်းလှသည်။ ဖင်ဆုံကြီးများကို အား၇ပါးရကိုင်ကာ ဆောင့်ထည့်နေသည်မှာ မီးပွင့်မတတ်ပင်။ဘွတ်..ဘွတ် ..အား..အင်း အီးယား ..အား အား လူရိုင်းမလေးများ၏ မသဲမကွဲ ညည်းညူသံနှင့်အတူ ခင်မှုံလေးတစ်ယောက်၏ ပိပိလေးမှာ အရည်များ တတောက်တောက်နှင့်ကျလာလေတော့သည်။ ထိုစဉ်မှာပင် လူရိုင်းခေါင်းဆောင်နှင့်တူသော လူတစ်ဦးက စင်ပေါ်သို့တက်လာကာ ခင်မှုံလေးကို ချည်ထားသော တိုင်အနီးကိုကပ်လာလေသည်။ဘူးတစ်ခုအတွင်းမှ ဆီနှင့်တူသောအရာနှင့် ပိပိလေးထိပ်ရှိအမွှေးလေးများကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သောအခါ ခင်မှုံလေးမှာ ထွန့်ထွန့်လူးသွားလေတော့သည်။
မခံစားဖူးသော အထိအတွေ့၊ အစေ့ထိလေးကို ထိမိသော အထိအတွေ့ကြောင့် တကိုယ်လုံး ရှိန်းခနဲ ၊ ဖိန်းခနဲပင်ဖြစ်သွား၇လေသည်။ထို့နောက် ဓားဖြင့် အမွှေးလေးများကို ရိတ်ပေးလေတော့သည်။တကျိကျိ ………….. တကျိကျိ နှင့် အထိအတွေ့ကလည်းတမျိုးရင်ခုန်စရာကောင်းလှသည် အပျိုမလေးခင်မှုံအဖို့ နတ်ပြည်ရောက်နေသည့်နှယ်.။ အမွှေးအားလုံးပြောင်စင်သွားသည့်အခါ ဆီဖြင့် ပိပိအုံလေးကို ပွတ်သပ်ပေးပြန်သည်။ခင်မှုံလေး၏ ပိပိလေးမှာ အတွင်းသားများ ပန်းရောင်တောက်နေပြီး အရည်ကြည်များဖြင့် စိုလက်နေသည်။ မို့မို့ဖောင်းဖောင်းလေးနှင့် ချစ်စရာကောင်းလှသည်။ လူရိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးမှာ မနေနိုင်ဖြစ်ရသည်ထင့်။ ပိပိ နှုတ်ခမ်းသားလေးကို လက်ညှိုးလက်ခလယ်ဖြင့် အသာဖြဲကာ အတွင်းပန်းရောင်သားလေးများကိုနှုတ်ခမ်းဖြင့် တအားစုပ်လိုက်လေသည်။အ.ား အင့် အဟင့်ဟင့် ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ အဟင့်ဟင့် …ပြက်..ပြက် လျှာလေးဖြင့် ထိုးမွှေလိုက်သည့်အခါအကြောပေါင်းတစ်ထောင် စိမ့်သွားသကဲ့သို့ ခံစားလိုက်ရလေသည်။ အစေ့ထိပ်လေးကို စုပ်လိုက်၊ အတွင်းသားလေးများကို ထိုးမွှေလိုက်ပြုလုပ်ပေးနေသော လူရိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီး၏ အပြုအစုကြောင့် ခင်မှုံလေးမှာ မျက်လုံးများမှေးစင်းကာ အကောင်းကြီးကောင်းနေလေတော့သည်။
အားအား……အား ဘာတွေလဲမသိဘူး ထွက်ကုန်ပြီအား ..အားတစ်ကိုယ်လုံးကျဉ်တက်သွားပြီ.. ပိပိအတွင်းမှ အရည်များ အပြင်သို့ပင် ပန်းထွက်လာသည်။ အရည်များမှာ များပြားလွန်းလှသည်။ လူရိုင်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏တစ်ခုလုံး စိုရွဲသွားလေတော့သည်။ ခင်မှုံလေးမှာလည်း တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားပြီး တစ်ချီပြီးကာ ခြေလက်များပင် နုန်းခွေသွာလေတော့သည်။ လူရိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးမှာ ခင်မှုံလေးကိုချည်ထားသော ကြိုးများကိုဖြေပေးလိုက်လေသည်။ခင်မှုံလေးမှာ တကိုယ်လုံးနှုံးခွေနေသဖြင့် ပုံလျက်သားလေး ထိုင်ကျသွားလေသည်။ ထိုစဉ် လက်ကြမ်းကြီးကသူမ၏မေးဖျားလေးကို ကိုင်ကာဆက်ခနဲ မော့လိုက်လေသည်။ ခင်မှုံလေးမှာ မျက်လုံးပြူးသွားလေသည်။ အကြောင်းမှာသူမမြင်လိုက်ရသည်ကား7လက်မခန့်ရှည်သော လီးကြီးပင်။ လီးကြီးမှာ အရည်များစိုရွှဲကာ ပြောင်ဝင်းနေသည်။ ထိပ်ဖူးကြီးမှာလည်း ပြူးနေသည်။ လူရိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးမှာ သူ၏စံချိန်မှီလီးကြီးကို အပျိုမလေးခင်မှုံ၏ ပါးစပ်အတွင်းသို့ ထိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်။အွတ်.. အဟွတ်ဟွတ် ဝူး ဒစ်ထိပ်ကြီးနှင့် ပါးစပ်တစ်ခုလုံးပြည့်နေသည်။ လီးကြီးကို သူမပါးစပ်အတွင်းသို့ အတင်းထိုးသွင်းနေသည်။ အား …ကျွန်မပါးစပ်တစ်ခုလုံး လီးကြီးကပြည့်ကျပ်နေသည်။
အရည်များကလည်းနှတ်ခမ်းတွေကိုပင် စီးကျလာလေသည်။ကျွန်မ ဆံပင်များကိုဆွဲကာ သူ၏ လီးကြီးဖြင့် ကျွန်မ ပါးစပ်ကို အတင်းပင်လိုးနေလေသည်။ လီးကြီးကရှည်လွန်းသောကြောင့် အာခေါင်ထိပင်ရောက်သည်။ ကြာလာတော့ ဘယ်လိုမှမရတော့ လက်ဖြင့် လီး၏အရင်းကိုကိုင်ကာ ထိန်းထားပေးရသည်။လူရိုင်းကြိးမှာ ပြီးချင်လာသည်ထင်၏ တအားအား နှင့်အော်မြည်လာသည်။မပြီးဘဲဘယ်နေပ့ါမလဲ ကျွန်မရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးက သူ့ကို အရသာတွေ့စေတာကိုး။ အား အ . ဝူးရားရား ပူနွေးသော သုတ်ရည်ပျစ်ပျစ်များက လျှာပေါ်ရောက်လာသည်။ ညှီတီတီနှင့် ခါးလွန်းလှသည် ကျွန်မထွေးထုတ်ပစ်ရန် စိတ်ကူးနေစဉ် လူရိုင်းကြီးက လီးကြီးကိုမထုတ်ပဲ အရသာခံနေလေသည်။ လီးကြီးက ကျွန်မပါးစပ်တွင်ဆို့ထားသဖြင့် ထွေးထုတ်မရတော့ပဲ မျိုချလိုက်ရလေတော့သည်။ဖလွတ် လီးကြီးပါးစပ်အတွင်းမှ ထွက်သွားသောအခါမှပင် အသက်၀၀ရှူနိုင်တော့သည်။ ကျွန်မ၏လူရိုင်းတောထဲက ဘဝငရဲကား မည်သည့်အချိန်မှပြီးမည်မသိ။ မောပန်းလွန်းသဖြင့် ခွေခွေလေးလဲနေမိတော့သည်။